अडाडा टुरान बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य
घर एशियाई फुटबल स्टोरीहरू अडाडा टुरान बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य
एलबी पूर्ण फुटबल प्रतिभा को प्रस्तुत गर्दछ जसले सर्वोत्तम उपनाम द्वारा जान्छ; 'एल Turco'। हाम्रो आर्दा टुरान बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्याङ्क तपाईले आफ्नो बचपन समय सम्मको उल्लेखनीय घटनाहरु पुरा खातामा ल्याउनुहुन्छ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उनीहरूको बारेमा धेरै ज्ञात तथ्याङ्कहरू धेरै र बन्द र अन-पिच भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ। थप adieu बिना, सुरु गर्न।
Arda Turan बचपन कथा प्लस Untold जीवनी तथ्य -प्रारम्भिक वर्ष
Arda Turan 30 जनवरी 1987 मा इस्तांबुलमा जन्मिएको, टर्कीका श्री एडानान टुरान (बुबा) र युसेल टुरान (आमा)। उहाँले कुनै प्रोफाईल भएको हुनुभएन र उनी के भए पछि उनीहरूको जीवनमा के गरेनन् भन्ने कुनै ज्ञान थिएन।
अर्डाको शैक्षिक रेकर्ड पनि उदाहरणीय थियो। तिनको प्रारम्भिक किशोरमा उहाँ स्कूलमा संघर्ष गर्नुहुन्थ्यो र प्रायः स्कूल हेडमास्टरको भ्रमणको गलत अन्तमा फेला पर्यो। यो यी अनुशासनिक मुद्दा थियो जुन उनले विद्यालय जाने निर्णय गरे उनको बुलाई होइन। यस बिन्दुमा, फुटबलले उनीहरूको बारेमा सोच्न सक्ने एक मात्र कुरा भयो।
फुटडाँडामा जाने निर्णयको अर्डे उनको आमाबाबुले स्वीकार गरे। तिनीहरूले तुरुन्तै इस्तांबुलको स्थानीय फुटबल अकादमीलाई दर्ता गरेर आफ्नो निर्णयमा प्रतिक्रिया व्यक्त गरे।
तिनका आमाबाबुले उनीहरूको बच्चालाई राम्ररी आमाबाबुको रूपमा सिक्न सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण चीजहरू मध्ये एक हो भनेर थाह थियो।
उनी सहयोगी बनेका थिए र अर्डडालाई डोऱ्याउन र पोषण गरे। समय संग Arda एक अद्वितीय व्यक्तित्व विशेषता विकसित गरे जो फुटबल को दर्शाता छ र उनको जीवन मा तिथि सम्म लगातार रहयो।
तिनको आमाबाबुको विकासको रूपमा, तिनका आमाबाबुले थप समर्थन पाएका थिए। उहाँलाई आनन्दित बनाउन उत्तम तरिका थियो कि त्यो खरीदारीको लागि बाहिर निकाल्ने थियो। तिनीहरूले उहाँलाई चाहानुपर्छ उहाँलाई किन्नेछ। तिनीहरूले उहाँलाई केहि चीजहरू सुरक्षित गरे जुन उनीहरुका सपनाहरु लुकाउन सक्थे। आदर्श रूप मा, उनि उसलाई सोन्छ, खाओ र अद्भुत खेल खेल्नुहोस।
Arda Turan बचपन कथा प्लस Untold जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
पिता: श्रीमान आदानन टुरान एक शान्तिपूर्ण व्यक्ति हो जसले इस्तांबुलको बेरारामपा जिल्लामा आफ्नो स्थानीय बिक्री व्यवसायको साथ धेरै सहज छ।
उनी सधैं समर्थनवादी भूमिकाको लागि उनी आफ्नो छोरालाई आफ्नो क्यारियरमा राजी दिए। तिनको पत्नी युकेसेलको विपरीत, उहाँले आफ्नो छोराको गतिविधिमा धेरैलाई बेवास्ता गर्नुहुन्न।
आमा: युकसेल आर्दाको आमा। त्यो धेरै बहिष्कार हो जसले विवादको बिचमा आफ्नो छोराको रक्षाको लागि उत्तम जान्छ।
उनी राष्ट्रिय पुर्खा विमानस्थलको दौडान उनको छोराको रक्षा गर्न छिटो छिटो थियो जहाँ उनको छोरा अर्डाले टर्की संवाददाता बिलाल मेसेलाई आक्रमण गरे।
युसेल टरान्सेडको अनुसार, "मेरो छोराको लागि एक लिङ्ग अभियान सुरु भएको थियो।"
अर्डा टुरानको आमा, युसेल टुरानले भने, "Arda एक धेरै राम्रो व्यक्ति हो र सामान्यतया कसैले जो कोही कसैलाई तोड्न चाहँदैनन्, यो सफलता हासिल गरेको छ कि यो देशमा कुनै फुटबल छैन, उसले अब मूल्य तिर्दैछ ... उनी मेरो छोरालाई सामूहिक लिङ्क अभियानको साथ समाप्त गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। ! मैले मेरो छोराको बारेमा अज्ञात लेखेको छु कि तिनीहरूलाई उनीहरूको लागि उत्तरदायी हुन गाह्रो छ। " बेशक अभिव्यक्तिको लागि स्थान दिँदै।
भाइ: ओकन टुरन एल्डरको बुबा।
ओकन ले इस्तांबुल टेक्निकल डिग्री (बीएससी) बाट 1989 मा वैमानिक तथा एस्टोनटिकल इंजीनियरिंग ईन्जिनियरिङ् र इस्टर्न टेक्निकल यूनिवर्सिटी, फाइनल ऑफ मैनेजमैंट, एक्सएनएनएमएक्स मा व्यवस्थापन इन्जिनियरिङ्बाट मास्टर डिग्री (एमएससी) प्राप्त गरेको छ। ओकनले 1992 मा डाटा सिक्योरिटीज कम्पनीमा वित्तीय विश्लेषकको रुपमा पूंजी बजारको क्षेत्रमा आफ्नो व्यावसायिक क्यारियर सुरू गरे र अहिलेसम्म सम्म वित्तीय वित्तीय विश्लेषकको रूपमा सेवा गरे।
Arda Turan बचपन कथा प्लस Untold जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
मिरांडा Shelia र Arda Turan डिसेम्बर 2016 बाट डेटिङ गरिएको छ। जर्जिया मोडेल मोडेल भर्खरको प्रेमिका भएको छ।
एस्लियन डोगान (तल देखाइएको) अर्डे टुरनको पूर्व प्रेमिका थिए। त्यो 4th डिसेम्बर, 1985 मा जन्मिएको छ र अंग्रेजी र टर्की दुवै बोल्छ। Aslian र Arda 2014 मा सुरू भयो र डिसेम्बर 2016 मा समाप्त भयो। दुवै बिचहरू एकअर्काको नजिक थिए।
Asides Aslian, Arda Turan ले धेरै वर्षहरु मा5अन्य सम्बन्ध राखेको छ। अर्डे टुरन सम्बन्धी सम्बन्ध सारांशमा6नामहरू समावेश छन्। (1) दिलारा ओजट्युनक (2007 - 2008 देखि दिनांकित), (2) सिनेम कोबल (दिनांकित 2012 - 2013) (3) सेलेन इमर (एक्सएनएनएक्स मा दिनांकित) (2012) Idil Firat (4 मा दिनांक) (2013) (5 मा दिनांकित) (2014) मिरांडा शेलिया (6)।
Arda Turan बचपन कथा प्लस Untold जीवनी तथ्य -उनी सोचेको एक पप स्टार हो
ला लिगा सर्दियों को ब्रेक को समयमा, तुरुन को कोशिश गरेर यसलाई पप स्टार को रूप मा बनाइयो। उहाँ 'आवाज' गाएर टर्कीको घर गए। उनले 'सारी क्लिमिली Mehmet Aga' भन्ने गीत गाए- एक क्लासिक टर्की रक गीत र, राम्रो, चलो बस भन्छ कि उनी फुटबलमा रहन्छन्। न्यायाधीशहरु अझै पनि आफ्नो कुर्सियों को वरिपरि बस को देखने को लागि को देख्न को लागि जो विशेष अतिथि थियो।
"मूर्ति माइकल जोर्डन र रोजर फेडरर
दाढ़ी मिडफिल्डर धेरैले विशेष गरी टर्कीमा एक आइकनको रुपमा हेरेको देखिन्छ। तर अरुडा टुरनसँग अन्य खेलहरूसँगको प्रतीक छ। टेनिस लेजेंन्ड रोजर फेडरर र बास्केटबल आइकन माइकल जोर्डन एथलीटहरू छन् जसलाई उसले हेर्छ।
एक साक्षात्कारमा उनले भने, "म सधैं सुधार गर्न कोसिस गर्छु, सबैभन्दा राम्रो खेलाडी र महिलाले सधैं राम्रो हुन प्रयास गर्छ। यही कारणले गर्दा माइकल जर्डन र फेडरर मेरो प्रतीक हुन्। "
यी दुवै किंवदंतियों को न केवल मैदान मा आफ्नो कौशल र क्षमता को लागि तर यसको अनुग्रह र उनको मानव प्रकृति पनि जानिन्छ। टुरानका दलहरूले प्रायः उनीहरूलाई दयालु र सुन्दर व्यक्तिलाई वर्णन गरेका छन् जसले उनीहरूलाई विश्वास गरेको कुरामा भावनात्मक छ।
"कारहरुको लागि प्रेम
टर्किस प्रेसको अनुसार, टुरानले पहिल्यै अस्टन मार्टिन डीबीएक्सएनएमएक्स र मर्सिडीज बेंज एसएलएस एएमजीको स्वामित्व पाएका थिए।
उहाँसँग कारहरुको लागि जुनून छ र हालै एक ड्राइभ चलाउँछ अडी RS6। जनवरी 2009 मा, उनी कार दुर्घटनामा संलग्न थिए इस्तानबुल। सौभाग्य देखि, तुरुन्तै कुनै गम्भीर घायल र केवल कटौती र चोट संग निरन्तर प्रशिक्षण भोग्नु भयो।
16 नोभेम्बर 2008 मा, इस्तांबुल बीबी विरुद्ध एक खेलको समयमा ट्यूरनले पराजित गर्यो।
अस्पताल पुग्न पछि, उनी कार्डियक सख्तीमा निदान गरिएको थियो। घटना पछि दिन, डाक्टरले यो घोषणा गरे कि टुरान राम्रो स्वास्थ्यमा थिए र चरम थकानले सतावट उत्पन्न भयो। नोभेम्बर 2009 मा, उनले सुँगुर फ्लू को एक सानो नाबालिटी को सामना गरे, तर केहि दिन को भित्र प्रशिक्षण शुरू गर्न को लागि बरामद गर्यो।
हालसम्म, तुर्क घाइते भएका छन्। यी दिनहरू, यो घडी वा हिउँद। वास्तवमा, आफूलाई हालको नियोक्ताहरूको विरुद्ध खेलमा घायल बनाइयो, उनले आफ्नो आँखामा आँसू संग मैदान छोडे।
तिनको शारीरिक चोटको बावजूद, उहाँ एक लडाकुलाई जान्नुहुन्छ। प्रायः कुनै पनि मृतक रवैया संग खेलाडीहरूको ilk मा विचार गरे। फुटबलका लागि अमूल्य छ कि आउन सजिलो छैन।
"लियोनिडाससँग Stricking समकक्ष
लोकप्रिय अभिनेता बीचको अज्ञात समकक्ष, जेरार्ड बटलर एक्लै लियोनिडास एक्सएनएनएक्सएक्स र अर्डे टुरानले एकपटक इन्टरनेटमा इन्टरनेट सेट गरे। सबैलाई ट्रिगर गरिएको क्षेत्र को ढिलाइ को अर्डे को तस्वीर को उपलब्धता थियो जुन लियोनिडास संग राम्रो तरिकाले जोडी।
Arda Turan बचपन कथा प्लस Untold जीवनी तथ्य -लिवरपूलको लागि खेल्ने सपना
खेलाडीहरूलाई प्राय: एक विशेष क्लबको लागि उनीहरूको मायाको आवाज सुन्न सकिन्छ। कसैलाई राम्रो भाग्य छ कि उनीहरूको मायालु पक्षका लागि खेल्न जबकि केही गर्दैनन्।
Arda Turan पछिल्लो वर्गको हो। युरो 2008 पछि, एन्ड्री अर्द्धविनले आफ्नो प्रेम एफसी बार्सिलोनाको लागि घोषणा गरे। दुर्भाग्यवश, यो कदम कहिल्यै भौतिकता छैन। 2011, टुरानमा, गलातसर्वे को लागी खेल्न पनि अंग्रेजी गिईन्स लिवरपूलको लागि आफ्नो प्रेमको आवाज उठाइयो। उहाँले यसो भन्नुभयो: "म सधैं उल्लेख गर्दछु, लिभरपूलले उनीहरूको परम्पराको कारणले मलाई आकर्षित गर्दछ।
"युरोपमा, म लिभरपूल समर्थक हुँ, त्यसैले यदि म युरोपमा खेल्छु भने, म तिनीहरूका लागि खेल्न चाहन्छु।"
उनले बताए कि यो Merseyside को Reds को लागी उनको सपना थियो। यद्यपि, लिभरपूल कहिल्यै फोन गरिएन। एटलेटिको म्याड्रिडले उनीहरूको फाइनान्समा डेलो सिमोनसँग हेलमेट गरेपछि उनलाई ला लिगा खिताब र च्याम्पियन्स लीग फाइनलमा प्रवेश गरेपछि उनी अहिले क्याम्प नाउमा गए। के लिभरपूलको हानिको लागी के देखिन्छ भने निश्चित रुपमा बार्सिलोनाको लाभ हुन्छ।
Arda Turan बचपन कथा प्लस Untold जीवनी तथ्य -एक पल्ट रिफरे मा एक बूट फेंक दिए
पिचमा उनको आज्ञाकारी प्रदर्शनको साथ राम्रो उदाहरणको बावजुद, टुरानले हालैका समयहरूमा आफ्नो स्वादलाई ठूलो मार्गमा हराएको छ, एटलेटिकोको कोपा डेल रेमा एक तर्फबाट आफ्नो बूट फ्याँक्ने बार्सिलोना अन्तिम सीजनमा पराजित गर्यो।
तैपनि, उनले आफ्नो टाउको हराउन अन्तिम शीर्ष खेलाडी हुने थिएनन्।
Arda Turan बचपन कथा प्लस Untold जीवनी तथ्य -स्वर्ण हृदयको साथ एक मानिस
अर्डे को सुनहरा दिल को जानिन्छ। उनले भर्खरै मिश्रमा एक दान्याई म्याचमा भाग लिनको लागि अरब संसारमा अनाथ्यानहरु को लागि धन जुटाई। गत वर्ष, उनले सोमा मेरा पीडित परिवारका परिवारको लागि धन उठाउन आफ्नो पूर्व घर (इजमिर अटटोर्क स्टेडियम) मा एक दान खेल खेले।
उहाँ विशेष गरी बिरामी बच्चाहरूलाई मदतको लागि जान्नुहुन्छ। मई मा, 2014, उनलाई Khojalay नरसंहार को शुभकामना दूतावास नियुक्त गरिएको थियो जो अस्टस्ट 161 को जातीय अजबैजानी नागरिकहरु को हत्या को सम्बन्ध मा सम्बन्धित छ। उहाँका गतिविधिहरूमा जागरूकता बढ्दै जाँदा विश्व शान्तिलाई प्रोत्साहन दिइन्छ।
उहाँ परिवार परिवार हुनुहुन्छ। आफ्नो पहिलो वेतनको साथ, तिनले आफ्नो आमाबाबुको लागि एक घर किन्नुभयो र भर्खरै कुनै कार, पोर्शको लागि आफ्नो कारको लागि एक कार खरिद गरे।
Arda Turan बचपन कथा प्लस Untold जीवनी तथ्य -एक समाजवादी
अर्डा टुरान एक पटक म्याद्रिडमा शहरको राजनीतिक स्पेक्ट्रममा आफ्नो घर खोले। स्थल बहस र छलफलका उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिन्छ। तुरुन्त आफैले समाजवादी हो र घरमा र पेशाको पछाडि सबैलाई परिवारमा व्यवहार गर्न जान्छ।
उहाँले इस्तांबुलको एक कार्यकारी क्षेत्रमा हुर्के र आफ्नो प्रारम्भिक वर्ष सडकमा बिताउनुभयो। आफ्नो बचपनको समयमा कठिन समय र काम गर्ने कक्षाको सामना गर्नुभएका समस्याहरूले उनको जीवनमा असर पारेको छ। एक साक्षात्कारमा उनले भने, "मैले सधैंका कामदारहरूको अधिकार, साधारण मानिसहरूको अधिकारलाई समर्थन गरेको छु।"
Turan द्वारा पीढी द्वारा एक निश्चित राजनीतिक खडा वंशानुगत थियो। तिनको बुबाले झुकाव विचारधारा छोडेका थिए, तिनको दादा दाहिने पनी राजनीतिको समर्थक थिए।
Arda Turan बचपन कथा प्लस Untold जीवनी तथ्य -फुटबल क्यारियर
टुरान बाईरामपुरमा फुटबल खेल्न थाले। जब उहाँ 12 मात्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँले 2000 मा गलाटसरयमा भर्नुभयो जहाँ उनी बाहिर उभिए। उनले 2006 मा गलाटस्सारसँग आफ्नो व्यावसायिक शुरुआत गरेपछि पाँच सीजनले टोलीका युवा रानहरूमा खेल्न थाले। यो सधैं यो गुलाबी थिएन। कम से कम युवाहरु को दैनिक फुटबल को कठोर संग सामना गर्न को लागि संघर्ष, कम से कम खेल को लागि आवश्यक गति र शक्ति। अर्डा 1987 जन्म वर्ष उमेर समूहमा सबैभन्दा कम खेलाडी थियो, र यसले आफ्नो प्रारम्भिक प्रदर्शनमा देखाउँछ। ठूलो, लीगमा अधिक अनुभवी खेलाडीहरूलाई खेलाडीको प्रति असामोषजनक थियो जुन सबै चालहरू थिए तर प्रभावकारिता थिएन।
उनले अगस्त 2006 मा टर्की राष्ट्रिय टोलीको लागि आफ्नो पहिलो ब्याटिङ गरे। टुरानमले पहिलो पटक लक्जमबर्गका लागि टर्कीका लागि खेल्ने टर्कीको लागि खेलिएको टर्कीका लागि टेलिभिजन खेलेको छ जसले टर्की एक्सएनएनएक्सएक्स-एक्सएनमक्स जीता।
2006 / 07 सिजनमा, टुरान ग्यालेटसयको सबैभन्दा आवश्यक खेलाडी मध्ये एक हुनुभयो। उनले 2008 मा उनको पहिलो सुपर लीग शीर्षक को दावा गरे। स्पेनिस क्लब एटेलिको म्याड्रिडले उनलाई 12 अगस्तमा 2011 मिलियन यूरोको लागि स्कूड गर्यो। एटलेटिको मैड्रिडको पहिलो सत्रमा, टुरानले यूरोपा लीग र यूईएफए सुपर कप जित्यो। एटलेटिकोको संख्या 10 ले 2013 / 14 सेन्जनमा आफ्नो टोलीको लीग खिताब विजयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। त्यो त्यही सिजनमा, एटिलेको मैड्रिडले 40 वर्षमा पहिलो पटक च्याम्पियन्स लिग फाइनलमा हराएको थियो। टर्की स्टार ताराले एक्सएनएनएमएक्स लक्ष्मीको गोल गरे र 22 सँग एटलेटिको म्याड्रिडमा चार वर्षको हिज्जेमा 32 म्याचहरूमा सहायता पाएका थिए। 177 लाख यूरोको ट्राफिक शुल्कको साथ, बार्सिलोनाको नयाँ साइन इन इतिहासको सबैभन्दा मूल्यवान टर्की प्लेयर हो।
Arda Turan बचपन कथा प्लस Untold जीवनी तथ्य -पत्रकार पत्रकार
टर्कीको राष्ट्रिय टोलीबाट आर्डे टुरन सेवानिवृत्तिले उक्त रिपोर्टलाई एक टोलीले विमानस्थलमा एक पत्रकारलाई घृणा गऱ्यो।
उनीहरूले म्यासेडोनिया विरुद्ध दुरुपयोग गर्ने एक रिपोर्ट मा एक पत्रकार संग मौखिक र शारीरिक टकराव रहेको आरोप लगाएका थिए, जो रिपोर्ट गरेको थियो जो ट्युनले बोनस मा पैसा कमाउन को लागि ट्यूरन को दोषी ठहराए।
अनुसार रायटर, टुरानले "गल्ती गरे" स्वीकार गरे र उनको राष्ट्रिय टीम छोडे।
"राष्ट्रिय टोली वर्दी पहने क्रममा मैले गल्ती गरे। यो कुरा थियो कि राष्ट्रिय टोली विमानमा हुनुपर्दैन, " उसले भन्यो।
अंग्रेजी अखबारको अनुसार यो स्वतन्त्र, घटना इटालीको टोलीको विमानमा भएको थियो जब टुरान कथित तुर्की प्रकाशनको बिलाल मीसँग भेट गरे Milliyet। यहाँ के छ नि: शुल्क क्यालेन्डर भएको रिपोर्टिंग छ:
"मलाई बिलाल मेसे भन्नुहोस्, के तपाईं त्यहाँ थिए?" उहाँले सुरु गर्नुभयो। "के तपाईं बोनस मुद्दाको बारेमा लेख्नुभयो जब तपाईं हाम्रो साथमा थिए? मैले पैसाबाट सोधेको छु? मैले बोनसका लागि कसलाई सोधें? बोल्नुहोस्। चलो। कसले तपाईले ती रिपोर्टहरू लेख्नुभयो? "टुरानले मलाई मेसामा चिन्ता गरेकी थिइन्, एक जना पत्रकारिता जसले स्क्वाड बेस्टार्मनीको लागि स्किपर टुरानलाई दोष लगाए।
र टुरनका बाबाले रिपोर्ट गरे भन्दा पहिले गएका थिए भनिन्छ कि उनीहरूलाई साथीहरूको छेउमा राख्नु पर्छ किनकि उसले गहिरो मासुलाई पकड्यो। अर्डा टुरानले बताए कि उनीहरूलाई कुनै पछाडि महसुस गर्दैन र त्यो अब टर्कीको लागि खेल्दैन। यो ठिक छ कि यी दुवै एक पटक असल मित्र थिए जुन तल चित्रमा देखिए।
Arda Turan बचपन कथा प्लस Untold जीवनी तथ्य -LifeBogger जीवनी रैंकिंग
उहाँ प्रायः उनको बल नियन्त्रण, डेलिबलिङ कुञ्जी र भिजुअलको लागि जान्नुहुन्छ। हामी तल आफ्नो जीवनी दर्जा प्रस्तुत गर्दछौं।
एटलेटिको म्याड्रिड फुटबल डायरी
एरिक गार्सिया बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्यहरू
मार्टिन ब्रेथवेट बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
क्लेमेन्ट लेन्गल्ट बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
Yaya Toure बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
थमस लेमर बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
Toby Alderweireld बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य